July 2013 - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Galaxy Tab27.0 (3G + WiFi) GT-P3100 Firmware ဗီယမ်နမ်ထုတ်လေးပါ
Nyan Thu Lin at 6:53:00 PM 0
စီဘောက်မှာတောင်းထားတာတွေ့လို့ ရှာပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဗီယမ်နမ်ထုတ်ပါ အောက်ကလင့်မှာဒေါင်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
Download Here Jelly Beam 4.1.2
Download Here ICS 4.0.4
ဒီကောင်လေးကတော့ သူနဲ့ တွဲသုံးရမဲ့ Odin Downloader လေးပါ။ Version မှားမှာစိုးလို့ တစ်ခါတည်းရှာတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ကဲအဆင်ပြေပါစေခင်ဗျာ . . .
Unknown at 6:13:00 PM 0
Huawei မှ ထုတ်လုပ်သော စင်္ကာပူ ဘက်က ပတ်ဝင်လာတဲ့ U8825-1 ကို ဈေးကွက်မှာ ဈေးတန်း ၂ မျိုးဖြင့် တွေ့ရပါတယ်။ root လုပ်လို့ရသည့် အမျိုးအစားနှင့် root လုပ်မရသည့် အမျိုးအစား ဟူ၍ ဈေးကွာခြားချက်ရှိပါသည်။ အခု ကျွန်တော် ပြောပြပေးမည့် နည်းကတော့ U8825-1 root လုပ်၍ မရသည့် ဖုန်းများ ကို root လုပ်နည်းဖြစ်ပါတယ်။
လိုအပ်သော ဖိုင်ကို ဒေါင်းပါ >>>> > U8825-1rootByHtayHlaingOo
(၁) Root လုပ်၍ရသည့် kernel ချိန်းနည်း
- ဒေါင်း၍ ရလာသော rar ဖိုင်ကို ဖြေလိုက်ပါ။
- အထဲမှ UPDATE.APP ပါသော dload folder ကို format ရိုက်ထားတဲ့ sd card (အနည်းဆုံး 2GB) ထဲသို့ ထည့်ပါ။
- ဖုန်းကို ပိတ်၍ sd card ကိုထည့်ပါ။
- volume up + power + volume down ကို ပြိုင်တူတွဲပြီး နှိပ်ပါ။
- update complete ဖြစ်သွားရင်တော့ ဖုန်းဟာ Reboot ကျသွားပါလိမ့်မယ်။
- home screen ပေါ်လာရင်တော့ Huawei U8825-1 ကို root လုပ်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်သွားပါပြီ။
(၂) Root လုပ်နည်း
- U8825-1 ကို Unlock root v3.0 ဖြင့် root လုပ်နိုင်ပါသည်။
UnLock Root ကို ဒီမှာ ကြည့်ပါ.. နောက်ဆုံးထွက် ဗားရှင်းတွေပါတွေ့ရပါတယ်ကိုမောင်ပေါက်ဆိုဒ်ထဲမှာပါ..
သတိ/ U8825D တွင်သုံးလျှင် ရသော်လည်း ခဏခဏ reboot ဆင်းနေလိမ့်မည်။ U8825D အတွက် မသုံးသင့်သေးပါ။
Ye Naing at 5:09:00 PM 1
ဒီတစ်ခါတော့ ကျွန်တော်တို့ ပစ်စတို ပစ်ကြရအောင်ပါ။ ဟုတ်ပါတယ်....ပွင့်ထွက်သွားအောင်ပစ်ရပါမယ်ခင်ဗျ။
ဖုန်း lock ပွင့်သွားအောင်ပစ်ရမှာပါ။
သူကတော့ Fun Locker ရဲ့ lock တစ်ခုပါ။
(မှတ်ချက်။ ။ ဖုန်းတွင်း၌သာပစ်ပါရန်။)
Zippyshae : Cyberlocker
Ye Naing at 4:38:00 PM 0
သူ့ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ မိမိရဲ့ဖုန်းမှာ Flashlight LED မီးပါဖို့တော့လိုပါမယ်။ Flashlight Call Pro
နှင့် အဆင်မပြေခဲ့ရင် ပြောင်းသုံးကြည့်ရအောင် Flash Blink ထပ်တင်ထားပါတယ်။အဆင်ပြေပါစေ.....
4shared : Zippyshare
Cyberlink PowerRecover 5.7 For Xp/Vista/7/8 (x32) (138 MB)
အိုင်တီသားလေး at 6:19:00 PM 0
Cyberlink PowerRecover ဆော့ဝဲလ်ကိုအသုံးပြုပြီး မိမိရဲ့ Hardisk partition တွေ၊ Computer System Files တွေကို Backup လုပ်ထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Virus တွေကိုက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် အကြောင်းအမျိုးမျိုး
ကြောင့် ၀င်းဒိုးပြန်မတက်တော့ရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် မိမိရဲ့ အရေးကြီး data တွေနဲ့ System ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကို ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမရှိပဲပြန်လည်ရယူ (Restore)နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Window 32 bit အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
PowerRecover - Easy protection and recovery, Restore your computer after hardware or OS failure, Protect yourself from unforeseen events like virus attacks, Back up hard drives or specific partitions, including system files, Burn toadisc or save onanetwork, hard drive, or USB device, Erase discs and more with convenient utilities.
- In the event of an accident, such as system corruption or hardware failure, you can recover system files or partitions immediately without data loss
- Perform full or incremental backups
- Back up the system while Windows is running
- Blu-ray Disc, HD DVD, DVD, CD, USB drive, External HDD, Memory card
- (SD, CF, MMC), Floppy Drive, ZIP Drive, FireWare Drive Video and Photo tools
- Define the size of your spilt image files for backups that exceed the default size
- Choose between one of three compression options: none, fast, and maximum
- Addapassword to backups to enhance security Video and Photo tools
- Don't be limited by the original format of image file ?
- You may freely select to recover to any file format
- Reformat hard disks
- Erase optical discs
- Print disc labels (requires installation of CyberLink LabelPrint)
Recovery Recovery tools ဆော့ဖ်ဝဲများ
ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး Data Recovery Software ဖြစ်တဲ့ Stellar Phoenix Windows Data Recovery Pro 6.0.0.0 Full
Maung Pauk at 12:38:00 PM 2
Stellar Phoenix Windows Data Recovery ဟာ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး Data Recovery Software နေရာကနေ ဖယ်ပေးရခြင်းမရှိသေးပါဘူး.. ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း နံပတ်(၁)မှာ အောင်မြင်ဝင့်ကြွားစွာ ရပ်တည်နေဆဲဖြစ်ပါမယ်.. Windows OS သုံး PC များအတွက်ဖြစ်ပြီး တန်ဖိုးကြီးမားလှတဲ့ Data တွေကို အကောင်းဆုံးအနေအထားနဲ့ ပြန်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်.. ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကလည်း ဒီ Software ကိုကောင်းကောင်း အသုံးပြုနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်.. ဒီနေ့တော့ နောက်ဆုံးထွက် Pro 6.0.0.0 ကို Full Version အနေနဲ့ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်.. Connection မကောင်းတဲ့အတွက် မူရင်းလူတင်ပြီးသာ Zippyshare ကပဲ ဒေါင်းကြဖို့ လင့်တစ်ခုပဲ ပေးနိုင်ပါတယ်.. 5.694 MB ရှိတဲ့ဖိုင်ကို တင်တာ.4နာရီကြာမယ်ဆိုလို့ လင့်တွေ အများကြီး တင်မပေးလိုက်နိုင်တာ နားလည်ကြလိမ်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်..
Search Lost Drive – The ‘Search Lost Drive’ option is useful to search any lost drive.
Auto Update – The ‘Auto Update’ feature enables software upgrade.
File Preview – The software enables preview of all the recoverable files after scanning.
Tree View – The recoverable files are shown inatree view after the scanning.
Formatted Files/Folders Recovery – Enables lost and formatted file and folders recovery from the drive.
E-mail Recovery – Recovers lost, deleted Emails from email clients, such as Microsoft Outlook and Outlook Express.
File Filter – The ”File Filter’ option allows recovery of files on the basis of their extensions.
Signature Based Recovery – Allows recovery of selected file types.
Resume Recovery – Helpful to restart recovery process at any later time.
Raw Recovery – Recovers all the data from hard drive, external drive, oralogical volume of the hard drive.
Save Scan – Enables to save the scanned data to start data recovery at later time using the saved scan result.
Drive Status – Monitors and updates about the status of the drive to inform about any impending hardware issues.
Clone Drive – Createsasimilar copy of the hard disk.
Create Image – Creates an images of the hard disk or the selected logical volumes.
Masking – The ‘Masking’ option is useful to narrow the scan result.
Nyan Thu Lin at 9:44:00 PM 2
ကျွန်တော်စမ်းကြည့်တာအဆင်ပြေလို့ ပြန်ရှယ်လိုက်တာပါခင်ဗျာ . . . ဘော်ဘော်တို့လည်းဒါလေးလုပ်ထားဦးနော်
MMUC မှ ကိုThu Rein ရေးထားတဲ့ Pro Myankey ကီးဘုတ်လေးပါ ။
ရိုက်ကွက်ဖွဲစည်းပုံလဲ ကွန်ပြူတာဇော်ဂျီကီးဘုတ် လက်ကွက်တိုင်းပါပဲ
တစ်ဘက်စာမျက်နှာမှာရှိတဲ့ ကိုယ်ရွေးချင်တဲ့စာကိုလဲ တစ်ဘက်သို့လှန်စရာမလိုပဲ ထိုစာလုံးရှိရာတည်နေရာကို လက်ဖြင့်နှစ်ချက်ခေါက်လိုက်ပါက နောက်ဘက်စာမျက်နှာရှိ စာလုံးကို အော်တိုရွေးချယ်ပြီးသားဖြစ်သွားပါမယ် ။
စာမျက်နှာလှန်စရာမလိုပဲ တစ်မျက်နှာထဲမှာ လိုရာပုံဖေါ်ရေးနိူင်တဲ့ ကီးဘုတ်အလန်းလေးဖြစ်ပါတယ် ။
( ထိုကီးဘုတ်မှာ Frozen Keyboard Pro ထက် ဘာအားသာလဲဆိုတော့
မိတ်ဆွေ Frozen Keyboard Pro ကို အသုံးပြုကာ မြန်မာစာရိုက်ပြီး ရှာဖွေမှူတစ်ခုလုပ်ကြည့်ပါ ။
သဘောက မိတ်ဆွေ Myanmar English Dictionary ဖြစ်တဲ့ Shwe Book Pro ဆော့ဝဲမှာ ( ရေ ) ဆိုပြီး မြန်မာစာရိုက်ပြီး စာရှာကြည့်ပါ ။
ကိုယ်ရှာဖွေလိုတဲ့ စကားလုံးတွေထွက်မလာပါဘူး ကီးဘုတ်ရဲ့စာတွေရှေ့နောက်မကူးအောင် ဖွဲစည်းထားတဲ့ အခြေခံ အားနည်းချက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် ။
Pro Myankey နဲ့ ( ရေ ) ဆိုပြီးရိုက်ကြည့်လိုက်ပါ ကိုယ်ရှာဖွေလိုတဲ့ စကားလုံးတွေ ထွက်လာပါလိမ့်မယ် )
" အင်စတော လုပ်နည်း နှင့် အသုံးပြုနည်းကို ဒီမှာလေ့လာပါ "
Pro MyanKey ကို အင်စတောလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာ Open ကို တန်းနှိပ်လိုက်ပါ
MyanKey Enable လုပ်ရန် ဆိုတဲ့စာကိုရွေးပါ
Pro Myankey အမှန်ခြစ်ပေးပြီး
ဘေးက စက်တင်ဖြစ်တဲ့ စက်ဘီးလုံးပုံလေးထဲကို ဝင်လိုက်ပါ
Type Of Keyboard ဆိုတဲ့ စာနေရာကိုနှိပ်ပြီး Myankey 11 Keys ကို ရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါ သင်အဆင်ပြေစွာ ထိုကီးဘုတ်ကို ချိန်းပြီး အသုံးပြုနိူင်ပါပြီ ။
Pro Myankey V2.0 Beta5ကီးဘုတ်ကို လိုချင်သူများ Zippyshare လင့်ဖြင့် ဒီမှာဒေါင်းယူနိူင်ပါတယ် ။
Pro Myankey V2.0 Beta5ကီးဘုတ်ကို လိုချင်သူများ Dev-Host လင့်ဖြင့် ဒီမှာဒေါင်းယူနိူင်ပါတယ် ။
Pro Myankey V2.0 Beta5ကီးဘုတ်ကို လိုချင်သူများ Limelinx လင့်ဖြင့် ဒီမှာဒေါင်းယူနိူင်ပါတယ် ။
အားလုံးပဲ အဆင်ပြေကြပါစေ.... ။
Credit to : Djjoe Man (MMF)
အိုင်တီသားလေး at 9:03:00 PM 0
သူငယ်ချင်းများအားလုံး ကွန်ပျူတာမှာ ရာသီခွင်အချစ် ဗေဒင်ကြည့်ကြမယ်ဗျာ။ ဗေဒင်ဆရာဆီ သွားစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ ခိခိ။ အားလုံးပဲ စမ်းသုံး ကြည့်လိုက်ပါနော်။ ပျော်ဖို့တော့ ကောင်းမှာပါ။ အားလုံးပဲ အဆင်ပြေကြပါစေဗျာ။
Download=>> Link 1/ Link 2
အိုင်တီသားလေး at 8:01:00 PM 0
Maung Pauk at 5:12:00 PM 5
အိုင်တီသားလေး at 3:25:00 AM 0
Aung Ko Htet at 5:03:00 PM 0
Google+ profile မှ Blogger profile သို့ပြောင်းလဲခြင်း (Blogger only)
Pyae Phyo at 5:54:00 PM 0
မင်္ဂလာပါ။ Tech in Blogging မှကြိုဆိုပါတယ်။ ခု ဒီမှာတော့ သူများတွေမေးဖူးချင်မှာပါ။ ကျွန်တော်လည်းပါပါတယ်။ တစ်ခါတုန်းကမှားပြီး Google+ ပြောင်းခဲ့တယ်လေ။ ခုတော့ Blogger profile ကိုပြောင်းနည်းရှိပါတယ်။ လိုလိုမယ်မယ်လေးပါ။ Blogger tips လေးတစ်ခုပေါ့။ ဆက်ဖတ်ကြည့်ပါ။
https://www.google.com/dashboard ကိုသွားပါ။ Google+ profile ဟုတ်မဟုတ်စစ်ပါ။ အောက်က Google+ နဲ့သုံးထားတဲ့အကောင့်တစ်ခုပါ။
ကဲ။ ပြောင်းဖို့စပြီ။ Google+ ကနာမည်နှစ်လုံးပဲပေးလို့ရတယ်။ ဟုတ်တယ်ဟုတ်။ Blogger profile ဘယ်လောက်မိုက်လဲဆိုတာလည်းပြဦးမယ်ဗျာ။ http://www.blogger.com/revert-profile.g ကိုကလစ်ပါ။ သင့်အကောင်နဲ့ password ထည့်ပါ။ ပြီးရင်အောက်ပါအတိုင်းပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ Switch to Limited Blogger profile ကိုကလစ်လိုက်ပါ။
Display Name မှာ နာမည်ပေးပါ။ ပြီးတာနဲ့ Continue to Blogger ကိုကလစ်ပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ Blogger profile သို့ပြောင်းလဲလေပြီဖြစ်ပါတယ်။
အဆင်ပြေပါစေ။ မရရင် ppt1459@gmail.com ကိုအပ်ပြီးမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
Disable ဖြစ်သွားသော Sitemap ကို Enable ပြုလုပ်ခြင်း [Blogger only]
Pyae Phyo at 5:51:00 PM 0
မင်္ဂလာပါ။ Tech in Blogging မှကြိုဆိုပါတယ်။ ခုဆိုရင် ဘလော့မရေးတာတော်တော်ကြာပါပြီ။ ခု အကို ကောင်းထက်ထွန်းအကြံပေးမှုကြောင့် ဆက်ရေးဖို့ အားရှိသွားတာပါ။ ကဲ။
Sitemap က SEO ကောင်းဖို့အတွက်ပါ။ ခုလိုမျိုး sitemap error ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းအရင်းက robots crewl error ပေါ့။ ခုလိုမျိုး အီးမေးလ်သင့်ဆီရောက်လာပါလိမ့်မယ်။
ကဲ။ အဲ့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းနည်းက လွယ်ပါတယ်။Settings ကိုသွားပါ။ ပြီးရင် Search preferences ကိုသွားပါ။
Custom robots.txt မှာ [Disabled] ပြရင် ပြင်သင့်ပါတယ်။ အဲ့ဘေးက Edit ကိုကလစ်ပါ။
No လို့ထုံးစံပြထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် Yes ကိုပေးလိုက်ပါ။
robots.txt အတွက်တစ်ခုတော့လိုအပ်မယ်။ ဒီနေရာမှာပြင်ပါ နေရာမှာ သင့်ရဲ့ blog link ကိုထည့်ပါ။
ဒီကိုကလစ်ပြီး Download ဆွဲပါ
အထက်ပါပေးတဲ့ download link ထဲက ကုဒ်တွေကိုကူးထည့်ပါ။ ပြီးလျှင် Save changes ကိုကလစ်ပါ။
[Enabled] ဖြစ်ပြီဆိုရင် အဆင်ပြေသွားပါပြီ။
အဆင်ပြေပါစေ။ ကျွန်တော်တို့အားရင် ဆက်ရေးပါဦးမှာပါ။
Myanmar IT Helper at 9:24:00 PM 0
LG Mobile Phone Secret Codes Collection:
lg mobile phone secret codes | lg mobile secret codes | lg mobile secret codes tricks | lg kg195 mobile secret codes | lg gm200 mobile secret codes | lg kp500 mobile secret codes | lg cdma mobile secret codes | lg gd510 mobile secret codes | mobile phone secret codes tips | mobile phone secret code list | mobile phone secret codes lg
LG portablealittle not quite the same as Nokia and Samsung portable phones.it likewise having mystery codes to test equipment and programming of versatile.
Here I am giving you record of LG cell telephone mystery codes.
Windows XP, Vista,7တွေမှာ Window 8 Charms Bar အသုံးပြုလိုသူများအတွက်
အိုင်တီသားလေး at 11:19:00 PM 0
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ Window XP, Vista,7တွေမှာ Window 8 Charms Bar Style အသုံးပြုလိုသူများအတွက် ဆော့ဝဲလ်လေးတစ်ခုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကလည်းသေးသေးလေးပါ။
1MB တောင်မပြည့်ပါဘူး။ Window XP, Vista,7တွေမှာ Window 8 Charms Bar Style နဲ့ အမြင်တစ်မျိုးဆန်းသစ်စေမှာပါ။ ဆော့ဝဲလ်ကို Install လုပ်ပြီး run လိုက်ပါ။ Desktop ညာဘက် အပေါ်ဆုံးထောင့် ကို Mouse Cursor လေးထောက်လိုက်ရင် Window 8 Charms Bar ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
Keyboard Shorcut ကတော့ Window Logo + C ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ Charms Bar ကနေ ကွန်ပျူတာပိတ်တာတို့ Computer setting ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကို အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေဗျာ။
Download=> Link 1 , Link 2, Link 3
မောင်စိုး at 2:12:00 PM 1
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို.နှုတ်ခွန်းဆက်သက်လိုက်ပါတယ်ဗျာ မိတ်ဆက်ပေးစရာရှိတယ် မိတ်ဆွေ
သူငယ်ချင်းကြိုက်မယ်လို.ထင်ပါတယ်ဗျာ. ကျွန်တော်ကပျော်သွားတယ်လေ Serial key ရှာဖွေချင်
အဲဒီဆိုဒ်လေးကို မွှေလိုက်ပေါ့ဗျာ တော်တော်များများတော့ရတယ်ဗျာ ကီးတွေလေ မောင်စိုးလဲ
သရဲခြောက်တဲ့ညတစ်ညလိုအမည်ရပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရပ်မှန်လေပါဗျာ။ မှတ်ချက် (ဂျာနယ်တစ်ခုကနေ ဖော်ပြလိုက်ပါ) ကျွန်တော်မောင်စိုးကို ဆက်သွယ်မယ်ဆိုရင်တော့ mgsoemin1995@gmail.com ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဗျာ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်လျှက်
Windows7ရဲ့အမြန်နှုန်းကို လွယ်ကူစွာ မြှင့်တင်ပေးနိုင်မယ့် နည်းလမ်းများ
Aung Ko Htet at 8:09:00 PM 0
Computer ထဲမှာ များပြားလှတဲ့ Application တွေ Program တွေကို Install လုပ်ကြပါတယ်။ ဒီ Application တွေ၊ Program တွေဟာဆိုရင် Configure မလုပ်ထားဘူးဆိုရင် ပုံမှန်အားဖြင့် Auto Start ဖြစ်နေတတ်ကြပါ တယ်။ ဒီတော့ Windows စတက်ပြီဆိုတာနဲ့ Application တွေ အားလုံးက စ run ကြပါတယ်။ အဲဒီတော့ Windows တက်စမှာ Application တွေ များရင် များသလို Loading လုပ်နေတဲ့ အတွက် Windows Startup Time ကို သိသိသာသာ ကြာစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် Windows စတက်ချိန်မှာ မလိုအပ်တဲ့ Program တွေကို မ run ဖို့အတွက် မလိုအပ်တဲ့ Startup Item တွေကို ဖြုတ်ထားရပါမယ်။
Windows Startup ကို ပြင်ဆင်ဖို့အတွက်-
Run box ထဲမှာ msconfig လို့ ရိုက်ပြီး ok နှိပ်လိုက်ပါ။
System Configuration box ကျလာပါလိမ့်မယ်။
General Tab ထဲက Startup Selection ဆိုတဲ့ Item အောက်က Selective Startup ကို Check box လေး On လိုက်ပါ။
ပြီးရင် Startup Tab ထဲကို သွားပါ။ အဲဒီထဲမှာ Windows Startup လုပ်ဖို့အတွက် မလိုအပ်တဲ့ Item တွေကို
Unchecked လုပ်ပေးရပါမယ်။ ပြီးရင် Apply OK ပေါ့။ ဒါဆိုရင်Windows စတက်ချိန်မှာ အရင် လို လေး မနေတော့ ပဲပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ အသုံးပြုလိုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(2) Temporary Internet File တွေကို ဖျက်ပါ
Temporary Internet File တွေကိုလည်း ရှင်း လင်းပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ Computer ထဲမှာ ဒီ Fileတွေ များလာခြင်းဟာ စက်ရဲ့ Performance ကျဆင်းစေရုံသာမက ကိုယ့် Hard disk ရဲ့ Free Space ကိုပါ လျော့နည်းသွားစေပါတယ်။ ပုံမှန် internet အသုံးပြုနေသူ တစ်ယောက်အနေနဲ့ကတော့ ဒီ File တွေ တစ်လ တစ်ခါလောက်တော့ ရှင်းပေး သင့်ပါတယ်။ ဒါကလဲ PC ရဲ့ အမြန်နှုန်းကို မြင့်တင်ပေး ရာ ရောက်ပါတယ်။
Temporary Internet File တွေကို ရှင်းဖို့အတွက်ဆိုရင် Start >> Control Panel >> Internet Option>> General Tab ထဲကို သွားပါ။ ပြီးရင် Delete Browsing history on exit ဆိုတဲ့ Check box ကို On ပေးပြီး delete button ကို နှိပ်ပါ။ Delete Browsing history box ကျလာရင် ဖျက်ချင်တဲ့ Item တွေကို Selected လုပ်ပြီး delete ကို နှိပ်လိုက်ရင် ရပါပြီ။
(3) Disk Cleanup ကို Run ပေးပါ။
Windows7ရဲ့ built in Utilities Tools တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ Disk Cleanup ကို Run ပေးပါ။ Disk Cleanup ကို
Run ပေးခြင်းဖြင့် Hard disk ပိုင်းဆိုင်ရာမှာ Error ကင်းကင်းရှင်းရှင်းနဲ့ လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့အတွက် PC ရဲ့ Performance ကို တိုးတက်လာစေပါတယ်။ Disk Cleanup ကို အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် Start >> All Program >> Accessories >> System Tools ထဲက Disk Cleanup ကို သွားပါ။ Disk Cleanup box ကျလာရင် ကိုယ် ပြုလုပ်မယ့် Driver Letter ရွေးပေးရပါမယ်။ ကိုယ် ရွေးလိုက်တဲ့ Drive Letter ကို Scaning လုပ်ပြီး ပေါ်လာတဲ့ List ထဲမှာ ရှိတဲ့ Delete လုပ်ချင်တဲ့ Item တွေကို ရွေးပြီး Ok ကို နှိပ်လိုက်ရင် ရပါပြီ။
(4) မသုံးတော့တဲ့ Program အဟောင်းတွေကို Uninstall လုပ်ပါ၊ Windows Feature တွေကို ပိတ်ပါ။
Computer မှာ Install လုပ်ထား Program တွေ၊ Application တွေ အများအပြား ရှိနေခြင်းကလဲ Computer ရဲ့ အလုပ်လုပ်မူကို နှေးကွေးစေပါတယ်။ ကိုယ့်အတွက် အသုံးလိုတဲ့ Program တွေက လွဲပြီး အခြား မလိုအပ်တဲ့ Program တွေ၊ Application တွေ ရှိနေမယ်ဆိုရင် ဖြုတ်ထား သင့်ပါ တယ်။ နောက်ပြီးတော့ အသုံးမလိုတဲ့ Windows Feature တွေကို ဖြုတ်ထားသင့်ပါတယ်။ Old program တွေကို ဖြုတ်မယ်ဆိုရင် Start >> Control Panel >>Program and Features ကို သွားပါ။ Run box ကနေ appwiz.cpl လို့ ရိုက်လည်း ရပါတယ်။ Unistall or ChangeaProgram ကျလာရင် မလိုအပ်တဲ့ Program တွေကို Selected လုပ်ပြီး Uninstall လုပ်ပါ။ Windows Feature တွေကို ပိတ်ချင်တယ်ဆိုရင် Turn Windows Feature on or off ကို သွားပါ။ Windows Feature box ကျလာရင် မလိုအပ်တဲ့ Features တွေကို Select လုပ်ပြီး Ok ကို နှိပ်လိုက်ရင် ရပါပြီ။
(5) Hard Disk ကို Defragment လုပ်ပါ။
Hard disk ကို Defragment လုပ်ပေးခြင်းကလည်း Hard disk data ဖတ်နှုန်း ကို မြန်ဆန်လာစေ တဲ့အတွက် Computer ရဲ့ စွမ်းရည် တိုးတက်လာစေပါတယ်။ Defragment လုပ်ဖို့အတွက် Windows ရဲ့ built in Defragmenter tools အပြင် အခြား Defragment tools တွေကိုလည်း သုံးနိုင်ပါတယ်။ Built in Defragmenter နဲ့ ပြုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် Start >> All Program >> Accessories >> System Tools >> Disk Defragmenter ကို သွားပြီး Defragment လုပ်လို့ ရပါတယ်။
မူးရင်း >>>> http://www.mmcollection.info/2013/07/windows-7.html
Pyae Phyo (MMiTD) at 12:41:00 PM 0